August 10, 2019 - Myitter
August 10, 2019 Myitter 0
ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ သာဂရမြို့၊ အင်းဒိုင်းရပ်နေအမျိုးသားတစ်ဦးကို အသက်မပြည့်သေးသည့် ၁၅ နှစ်အရွယ် ရည်းစားဖြစ်သူနှင့်ချိန်းတွေ့စဉ် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သဖြင့် ၎င်းကို မုဒိမ်းမှု၊ လူခိုးမှုပုဒ်မနှစ်ခုဖြင့သြဂုတ် ၉ ရက်က အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သာဂရနယ်မြေရဲစခန်းထံမှ သိရှိရပါတယ် …။ အင်းဒိုင်းရပ်နေ ကိုအောင်စိုးလင်း(၂၇နှစ်)သည် တစ်ရပ်ထဲနေ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို […]
တရုတ်မှာ အင်အားကြီးတိုင်ဖုန်းဝင်ရောက် ၊ လူ ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွေ့ ပြောင်းနေရLekima တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကို ဒီကနေ့မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မုန်တိုင်းကြောင်း ၁၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၆ ယောက် ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူဦးရေး ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာကို ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားလိုက်တယ်လို့ […]
မြေပြိုရခြင်း (Landslides) အဓိက အကြောင်း အရင်း…
မြေပြိုခြင်း (Landslides) အကြောင်း မြေပြိုခြင်းဟာ သဘာဝဘေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြေငလျင် လှုပ်ခြင်း၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ မြေဆီလွှာ ပျက်ဆီးခြင်း နှင့် မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း အစရှိသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဆက်စပ်သလို.. အချို့သော လူလုပ်အရာများ (ဥပမာ။ မြေစာပုံခြင်း၊ ဖောက်ခွဲခြင်း) ကြောင့်လဲ မြေပြိုတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ […]
မိဘမဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှ သားမယား ပြုကျင့် RND၊ ဩဂုတ် ၉ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ အမှတ်(၆) ရပ်ကွက်၊ တိုးချဲ့(၂)၊ မြိုင်သာယာရပ်၌ မိဘမဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှ သားမယား ပြုကျင့်၍ […]
မရောက်ဖူးသူများဖူးမြော်နိုင်ရန် မျှဝေပေးပါတယ်ရေဘယ်လောက်ကြီးကြီး ရေမမြုပ်တဲ့ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး တည်ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားနှစ်ဆူ
မရောက်ဖူးသူများဖူးမြော်နိုင်ရန် မျှဝေပေးပါတယ်ရေဘယ်လောက်ကြီးကြီး ရေမမြုပ်တဲ့ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး တည်ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားနှစ်ဆူ ရေဘယ်လောက်ကြီးကြီး ရေမမြုပ်တဲ့ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး တည်ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားနှစ်ဆူ။မရောက်ဖူးသူများဖူးမြော်နိုင်ရန် မျှဝေပေးပါတယ်။ ဒီစေတီတော်နှစ်ဆူကတော့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မင်းလှမြို့နယ် ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ အနီးကဖြစ်ပါတယ် ထူးခြားတာကတော့ နှစ်စဉ်ရေကြီးတိုင်း ရေဘယ်လောက်များများ စေတီတော်တွေရဲ့ရင်ပြင်တော်တွေသော်မှ ရေမမြုပ်ပါဘူးတဲ့ ဘုရားကုန်းမြေကလည်းအရမ်းမြင့်နေလို့လဲမဟုတ်ပါဘူး ယခုလိုထူးခြားအံ့ဖွယ် တွေ့ခဲ့ရတဲ့စေတီတော်တွေကတော့ […]
ရင်​ထဲ​တောင်​ ဆို့နင့်​သွားတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုး ရင်နင့်ဖွယ် မြင်ကွင်းများ
ပရဟိတတွေကို ကိုယ်ကျိုးကိုမကြည့်ပဲ စွမ်းစွမ်းတမံ ပြုလုပ်လေ့ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအရမ်းချစ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကတော့ ပရဟိတမင်းသားကြီးလို့တောင် ခေါ်ဝေါ်ရသူတစ်ဦးပါ။ လတ်တလောမှာ​တော့ ​ဝေဠု​ကျော်​က မွန်​ပြည်​နယ်​၊ သဲဖြူကုန်းရွာ ​တောင်​ပြိုကျမှုဆီသို့ အ​ရေး​ပေါ် သွား​ရောက်​ကယ်​ဆယ်​ခဲ့တဲ့ ​ဝေဠု​ကျော်​​ဖောင်​​ဒေးရှင်းက အဖွဲ့သား​တွေရဲ့ အ​ကြောင်းကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ​ မွန်​ပြည်​နယ်​မှာ ​တောင်​ပြိုကျမှု​ကြောင့်​ […]
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း…..(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာ ကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ […]
ရက်စက်လေပြီ မိုးမင်းရယ်…ယနေ့ 10-8-2019
ရက်စက်လေပြီ မိုးမင်းရယ်… အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ ပေးပို့ပြောကြားချက်အရမွန်ပြည်နယ် ဘက်မှာ ၃ထပ်တိုက် ၂ထပ်မြုပ်နေပါပြီတဲ့… မိုးရွာတာ ၄ရက်ရှိပြီး မရပ်မနားရွာနေပါတယ်… ကယ်ဆယ်ရေးများလည်း နေရက်ခေါင်လို့မရောက်သေးပါဘူး… ယခုပုံများမှာ သာသနာဝန်ထမ်း သံဃာတော်များပါ ဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြတဲ့ မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ် ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်းများ အမြန်ဆုံးသွားရောက် ကူညီကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်…. ဒီ​နေ့ဟာ​မွန်ပြည်နယ် အတွက်​ကံအဆိုးဆုံး​နေ့ပါ …. […]